तालको पानी बगेर जानी- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
तालका रुपमा रहेको काठमाडौंको पानी सुकेको दुर्लभ दृश्य देखेका पुर्खाले आफ्ना सन्तानलाई त्यो कथा सुनाउँदै पुस्तान्तरण गरे । ती अनेक कथा खिइँदै गएर दुईवटा मात्र बाँकी छन् । एउटा– तालको पानी चोभारबाट बगेर सुकेको थियो । अर्को– ताल सुक्नुअघिदेखि नै आदिम बासिन्दाका रुपमा नागजाति थिए ।
काठमाडौं ताल सुकेर मानव बसोबासका लागि उपयुक्त उपत्यकामा परिणत भएको १० हजार वर्षअगाडिको यथार्थ अहिले इतिहास भनौं इतिहास होइन, मिथक भनौं मिथक मात्रै होइन भनेजस्तो भएको छ ।
आश्विन ९, २०७८ भोगीराज चाम्लिङ
भूगर्भशास्त्रीय अध्ययन भन्छ— आदिम समयमा काठमाडौं उपत्यका तालका रूपमा थियो । ठ्याक्कै यही कुरा काठमाडौं उपत्यकामा प्रचलित मिथकहरूले पनि भनिरहेका छन् । जस्तो कि बौद्ध मिथकअनुसार, उहिल्यै यो तालको नाम नागबास (नागह्रद, नागदह) थियो । तालमा विपश्वी बुद्धले कमलको बीउ रोपे । त्यो कमलमा ज्योतिरूप स्वयम्भूका रूपमा आदिबुद्धको प्रादुर्भाव भयो ।
यो कुरा महाचीनका बोधिसत्त्व मञ्जुश्रीले अन्तरध्यानद्वारा पत्ता लगाए । कृषक, भिक्षु, राजा धर्माकर र उनकी दुई पत्नीसहित आएर मञ्जुश्रीले स्वयम्भूको पूजा र परिक्रमा गरे । दोस्रो पटक परिक्रमा गर्ने क्रममा उनले चोभारलाई तरवारले काटी निकास बनाए । तालको पानी बगेर जान थाल्यो । मञ्जुश्रीचाहिँ नागराज कर्कोटकलाई उपत्यकाको सम्पूर्ण धनसम्पत्ति जिम्मा लगाएर मेष संक्रान्ति (वैशाख) का दिन (हाल टौदहका रूपमा प्रख्यात) तलाउमा बस्न गए ।
जस्तो कि हिन्दु मिथकअनुसार, शिवले ‘काठमाडौं उपत्यका जलमग्न हुनेछ र कृष्णले बाँध भत्काएपछि वाग्मती नदी बाहिर बगेर जानेछ’ भनेर भविष्यवाणी गरेका थिए । इन्द्रलाई जितेर स्वर्गमा राज्य गरेका वाणासुरका छोरा महेन्द्रदमनले वाग्मती नदी थुनेर काठमाडौंमा ठूलो ताल बनाई भाइहरूलाई सुरक्षा गर्न खटाए । श्रीकृष्णका छोरा प्रद्युम्नले बाँधको रक्षा गर्न बसेका महेन्द्रदमनका भाइहरू शंखाशुर र कच्छपासुरलाई मारिदिए । वाग्मती प्रकट भएर गंगाको दर्शन गर्ने इच्छा व्यक्त गरेपछि श्रीकृष्णले बाँध भत्काइदिए । पानी बग्यो । ताल सुक्यो ।
जस्तो कि अर्को हिन्दु मिथकअनुसार, दानासुरकी पत्नीले वाग्मतीमा स्नान गरी वसुन्धरा (वसुधरा) को स्तुति गरेपछि छोरी जन्माइन्– प्रभावती । छोरीलाई खेल्नका लागि भनेर दानासुरले पानी थुनी काठमाडौं उपत्यकालाई जलमग्न बनाए । तर, दानासुरले लुटेको आफ्नो खजाना खोस्न आएका विष्णुले चोभार (कच्छपाल) को पहाड काटी पानीको निकास खोलेर प्रभावतीलाई लिएर गए । यी धार्मिक मिथक फगत कल्पना हुन् कि यसको ऐतिहासिक जरा पनि छ ? यो प्रश्नको जवाफ लेखको अन्त्ममा खोजी गरिनेछ ।
‘प्यालिओ–काठमान्डु लेक प्रोजेक्ट’ अन्तर्गत जापान र नेपालका भूगर्भशास्त्रीहरू (हारुताका साकाई, तेत्सुय साकाई, रिई फुजी, योसिहिरो कुवाहारा, फुमिनोरी सावामुरा, हिदेउ तबाता, अजुमी होसोई, काजुनोरी अरिता, पीताम्बर गौतम, अनन्तप्रसाद गजुरेल, विशालनाथ उप्रेती, सुरेशदास श्रेष्ठ) ले ताल निर्माण र पानीको निकासपछि बनेको उपत्यकाबारे विस्तृत अध्ययन गरेका छन् । त्यसबाहेक थुप्रै भूगर्भशास्त्रीहरू (टोनी हेगन, मिसा सुगिमोटो, र्‍योको सेतोगुची, कियोसी साइजो, कजुओ किमुरा, नोरिओ मियोसी, एचजी दिल, गोपालमानसिंह डंगोल, मुकुन्दराज पौडेल, एस. भण्डारी, खुमनारायण पौडेललगायत) ले गरेको अध्ययन पनि महत्त्वपूर्ण छ । ती अध्ययन ‘जर्नल अफ् नेपाल जिओलजिकल सोसाइटी’ का साथै अन्य प्रतिष्ठित जर्नलमा अनुसन्धान लेखका रूपमा प्रकाशित छन् । यी अध्ययनहरूले भन्छ—
३० लाख वर्षपहिले काठमाडौंका दक्षिणतर्फका पहाडहरू उठिसकेका थिएनन् । त्यसैले वाग्मती नदी उत्तरबाट सीधै दक्षिणतर्फ बग्थ्यो । त्यही क्रममा वाग्मती नदीले बगाएर ल्याएका ढुंगा–माटो–बालुवाबाट काठमाडौंको दक्षिणमा पर्ने तारेभीर (३० लाख वर्ष) को भूसतह बन्यो । त्यसमाथि वाग्मती नदीले नै बगाएर ल्याएका सामग्री थुप्रिँदा लुकुन्डोल (२८ लाख वर्ष) भूसतह बन्यो । लुकुन्डोलमाथि फेरि इटाइटी (१० लाख वर्ष) भूसतह बन्यो । काठमाडौं उपत्यका ताल बन्नुअघिको त्यस अवधिलाई भूगर्भशास्त्रीहरूले ‘प्रोटो–वाग्मती नदी चरण’ नाम दिएका छन् । २८ लाख वर्षदेखि चाहिँ काठमाडौं तालमा परिणत हुन थाल्यो । सुरुमा बनेको त्यो ताल धेरै सानो थियो र काठमाडौं उपत्यकाको मध्य–दक्षिण भागमा सीमित थियो । १० लाख वर्षअघि जब महाभारत पर्वत शृंखला छिटोछिटो अग्लिन थाल्यो, तब चोभार पनि अग्लिएर वाग्मती नदीको वहावलाई थुनिदियो र आदिम ताल (प्यालिओ लेक) फैलिँदै गएर काठमाडौं उपत्यका ढाक्यो । चोभार अग्लिएपछि लुकुन्डोल क्षेत्र तालभन्दा बाहिर पर्‍यो ।
काठमाडौं उपत्यकाको उत्तर र दक्षिण दुवै पाटोमा पहाडको फेदमा दलदल छ । पहाडको फेदमा आफैं पनि यस्तो दलदल माटोको तह नबन्ने होइन, तर एकदुई ठाउँमा मात्रै होइन, काठमाडौं उपत्यकाभरि नै छ– दलदल । त्यस्तै सबै दलदल निर्माणको समय समान छ । दलदलको बाहिरी तहको उमेर (समय) ३० हजार वर्ष देखिएको छ । त्यस हिसाबले हेर्दा आजभन्दा ३० हजार वर्षअघि सिंगै काठमाडौं उपत्यका तालका रूपमा थियो । त्यो ताल समुद्र सतहदेखि १४०० देखि १४४० मिटर उचाइसम्म फैलिएको थियो ।
एउटा विषय स्मरणीय छ, ३० हजार वर्षपहिले काठमाडौं र बनेपा एउटै तालभित्र थियो । पछि मात्रै अलग–अलग उपत्यकाजस्तो हुन पुगेको हो ।
काठमाडौं उपत्यकाको जमिनमुनि बालुवा, ढुंगा–माटो, रोडा, कालीमाटीबाट बनेका थुप्रै तह छन् । यी तहको अधिकतम मोटाइ ६५० मिटरसम्म छ । कालीमाटीको मात्रै कुरा गर्दा यो काठमाडौं उपत्यकाको जमिनमुनि व्यापक रूपमा फैलिएको छ र २०० देखि ४०० मिटरसम्म बाक्लो तह बनेको छ । भूगर्भशास्त्रीहरूका लागि यी तहहरू एउटा बृहत् पुस्तकालयजस्तै हुन्, जुन अध्ययन गरेर उनीहरूले ३० लाख वर्षदेखि हालसम्मको भौगर्भिक र जलवायु परिवर्तनबारे थाहा पाउने गरेका छन् ।
काठमाडौं उपत्यका तालमा परिणत भएपछि नदीले बगाएर ल्याएका र छेउछाउका डाँडाकाँडाबाट बगेर झरेका पातपतिङ्गर, ढुंगामाटो, बालुवा, रोडा सबै तालमा थुप्रिन थाल्यो । पानीको सतह घटबढ हुँदा तिनै थुप्रोबाट अहिले देखिएका भूसतहहरू बन्न पुग्यो, जसमाथि अहिले काठमाडौं उपत्यकाका तीन सहर बसेको छ । झन्डै गोलाकार काठमाडौं उपत्यका जसको पूर्व–पश्चिम लम्बाइ ३० किमि र उत्तर–दक्षिण लम्बाइ २५ किमि छ ।
महाभारत पर्वत शृंखला माथि उठेर आदिम ताल दक्षिणबाट उत्तरतर्फ सर्ने क्रममा सबैभन्दा पहिला प्याङगाउँ, चापागाउँ र बोडेगाउँका भूसतहहरू बने । त्यसपछि बनेका गोकर्ण (५०,०००–३४,००० वर्ष), ठिमी (३३,०००–२४,००० वर्ष) र पाटन (१४,०००–२०,००० वर्ष) चाहिँ कान्छा भूसतहहरू हुन् । धापासी (३९,०००–४५,००० वर्ष), धापासीदेखि गोकर्णसम्म (४५,०००–३४,००० वर्ष), टोखा (१९,०००–१४,००० वर्ष), कोटेश्वरलगायत पनि नयाँ भूसतहहरू नै हुन् । पाटन तहमाथि चाहिँ पाटन र काठमाडौं सहर बसेको छ । यीमध्ये जेठो भूसतह काठमाडौं उपत्यकाको दक्षिणी क्षेत्रमा, कान्छो भूसतह उत्तरी क्षेत्रमा पर्छ ।
काठमाडौं उपत्यकाको तालको पानी तीव्र गतिमा घट्ने क्रममै गोकर्ण, ठिमी र पाटनका भूसतहहरू बनेका हुन् । किनभने, यी भूसतहहरूको उचाइ पानी बाहिर जाने चोभार भञ्ज्याङ बराबर छ । गोकर्ण तालको पानी सबैभन्दा उच्च तहमा हुँदा बनेको हो भने ठिमी र पाटनचाहिँ तालको पानी सबैभन्दा तल भएको बेला । समयका हिसाबले यी भूसतहहरू ५० हजारदेखि १० हजार वर्ष पहिले बनेका हुन् ।
कहिले सुक्यो तालको पानी ?
गोकर्णको भूसतह बनेका बखत काठमाडौंको तालको पानी तीव्र गतिमा घटेको थियो । तालको पानी त्यसरी बगेर जानुमा मूलतः तीनवटा कारण हुन सक्ने सम्भावना छ । पहिलो कारण हो, पृथ्वीको गर्भभित्रका महादेशीय आकारका टेक्टोनिक प्लेटको हलचल । टेक्टोनिक प्लेटहरूले एकअर्कालाई निरन्तर ठेलाठेल गरिरहेका हुन्छन् । त्यही क्रममा महाभारत पर्वतशृंखला माथितिर उठ्दा कीर्तिपुर–चोभारका बीचमा खण्डीकरण हुन पुग्यो र त्यहाँ गहिरो गल्छी बन्यो । त्यही गल्छी पानी बाहिर जाने बाटो बन्यो ।
दोस्रो कारण हो, जलवायुमा परिवर्तन । टेक्टोनिक प्लेट उठेका कारण त्यसले जलवायुमा परिवर्तन आयो । किनभने, होचा भागहरू अग्लिएर पहाड बन्न पुगे । प्लेस्टोसिन युग (२६,००,०००–१०,०००) को अन्तिम चरणमा जलवायु परिवर्तन हुँदा भारी वर्षा भएर बाढी आएका कारण काठमाडौं उपत्यकाको पानीको तह बढ्न पुग्यो । र, तालको पानी बाहिर बगेर जान थाल्यो ।
तेस्रो कारण हो, भूकम्प । भूकम्पीय हलचलका कारण ठूलो परिमाणमा तालको पानी बाहिर बगेर गयो ।
यी तीनवटै कारण अथवा तीनमध्ये जुनसुकै कारणले तालको पानी बाहिर जान थालेको भए पनि पूर्ण रूपमा पानी बगेर जानुमा चाहिँ चोभार भञ्ज्याङको बनावटले भूमिका खेलेको छ । चोभार भञ्ज्याङ पहिला नदीले बगाएर ल्याएको सामग्री थुप्रिँदा बनेको मैदान थियो, तर महाभारत पर्वत शृंखला उठ्दाअग्लो हुन पुगेको मात्रै हो । त्यसैले तालको पानी बाहिर बग्ने क्रममा चोभार भञ्ज्याङको माटो पनि खियाउँदै बगाउँदा गहिरो गल्छी बन्न पुग्यो र तालको पानी पूर्ण रूपमा निख्रियो ।
तालको पानी सुक्नुमा चोभारकै शृंखलामा पर्ने दनुवार गाउँ क्षेत्रको निकासले पनि सहयोगी भूमिका खेलेको थियो । यसो भन्ने आधार हो— तालको पानी अन्तिम पटक सुकेको स्थान दनुवार गाउँनजिक हुनु । त्यस्तै दनुवार गाउँवरपरबाट वाग्मती नदीले आफ्नो धार परिवर्तन गरेर भूकम्पीय हिसाबले सक्रिय क्षेत्र (एक्टिभ फाउल्ट) हुँदै बग्थ्यो । एक्टिभ फाउल्ट भएका क्षेत्रमा जमिनमा धाँजा फाट्ने, पहिरो जाने हुनाले दनुवार गाउँनजिक साँघुरो धाँजा फाट्यो र पानी बाहिर जान थाल्यो ।
त्यसो भए तालको पानी कहिले सुक्यो त ? काठमाडौं उपत्यकाको तालको पानी थुप्रै पटक घटेको थियो– पहिलो पटक ४८ हजार वर्षपहिले, दोस्रो पटक ३८ हजार वर्षपहिले । त्यस्तै लगभग १९ हजार वर्षपहिले पनि कीर्तिपुर र चोभारबीचको भञ्ज्याङ भत्किएर पानी बाहिर गएको थियो ।
त्रिभुवन विमानस्थलको दक्षिणी भागमा मनोहरा नदीबाट नमुना माटो संकलन गरेर समय निर्धारण गर्दा १२,४०५ देखि १२,५३१ वर्ष पुरानो देखिएकोले काठमाडौं उपत्यकाको पानी १२ हजार वर्षपहिले पूर्ण रूपमा बगेर गएको थियो भन्ने अनुमान गरिएको छ । तर, जमिनमुनिको कालीमाटीको माथिल्लो भागको समय निर्धारण गर्दा चाहिँ तालको पानी १० हजार वर्षभन्दा पछि खाली भएको देखिएको छ । जे होस्, काठमाडौं तालको पानी पूरै खालि हुन पटकपटक गरेर लगभग ३६ देखि ३८ हजार वर्ष लाग्यो । यद्यपि अहिले पनि काठमाडौं उपत्यका अग्लिने क्रम भने निरन्तर छ । ताल सुकिसकेपछि काठमाडौं उपत्यका कम्तीमा २०० मिटर माथि उठिसकेको छ ।
पुरातात्त्विक तथ्यहरूले भन्छन्— लगभग ३२ हजार वर्षअघि काठमाडौं उपत्यकामा मानवहरू घुमन्ते सिकारी जीवन बिताउँथे । बूढानीलकण्ठनजिकै धोबीखोलाछेउमा सोभियत पुरातत्त्वविद् सेटेन्कोले ढुंगे हतियार फेला पारे, जुन ३२,००० वर्ष पुरानो भएको अनुमान छ । काठमाडौंकै डुमाखालमा मोहनप्रसाद खनालले फेला पारेको ढुंगे हतियारलाई पनि ३२ हजार वर्ष अथवा त्योभन्दा पुरानो मानिएको छ ।
हाँडीगाउँको सत्यनारायण मन्दिरनजिकै गरिएको उत्खननमा फेला परेको ढुंगाको बन्चरोलाई आद्य–ऐतिहासिक (प्रोटो–हिस्टोरिकल) मानिएको छ (चियरा सिल्भी एन्टोनिनी र जियोभान्नी भेरार्डी) । इतिहासकार पुरुषोत्तमलोचन श्रेष्ठले चाँगुको चापाख्वाल, भक्तपुरको घ्याम्पेडाँडा, पनौती काभ्रेको शंखपाटीचौरबाट ६ वटा नवपाषाण (नयाँ ढुंगे) हतियार संकलन गरेका थिए । ललितपुरको लुभु क्षेत्रबाट जनकलाल शर्माले फेला पारेको नवपाषाण (ढुंगे) बन्चरोलाई ४ हजार वर्षअघिको अनुमान गरिएको छ । उसो भए ३२ हजारदेखि ४ हजार वर्षअघिसम्म काठमाडौं उपत्यकामा अटुट रूपमा मानव बसोबास थियो कि बीचबीचमा खण्डित भएको थियो भन्ने प्रश्न उठ्छ । त्यसको सम्भावित उत्तर काठमाडौं उपत्यकाको जलवायुसम्बन्धी अध्ययनले दिएको छ ।
जमिनमुनिबाट प्राप्त वनस्पतिका बीउ र जीवका अवशेषहरूका आधारमा गरिएका जलवायुसम्बन्धी अध्ययनअनुसार, पनि ३५,००० देखि २६,७०० वर्षअघिसम्मको काठमाडौं उपत्यकाको जलवायु मानव बसोबासका लागि उपयुक्त थियो । २६,७०० देखि १६,००० वर्षका बीचमा चाहिँ जलवायु चिसो–सुक्खा मात्रै होइन हिमयुग नै चलेकाले यो अवधिमा काठमाडौं उपत्यकामा मानव बसोबास थिएन कि भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । फेरि १६,००० देखि १४,४०० वर्षदेखिचाहिँ जलवायु क्रमशः न्यानो र वर्षायुक्त हुन थालेकाले सिकारको खोजीमा आइपुगेका मानवहरूको पुनः बसोबास सुरु भएको हुन सक्छ । अर्को कुरा, लुकुन्डोल क्षेत्रमा गाई, सुँगुर र मृगका हाडका अवशेषहरू पाइएकोले सिकारद्वारा जीविकोपार्जन गर्दै काठमाडौं उपत्यकामा निरन्तर लामो समय बसोबास गर्ने अनुकूलता थियो ।
काठमाडौं उपत्यकामा सर्वप्रथम मानव बसोबास सुरु भएको स्थानमध्ये एउटा हुनुपर्छ— साँखु क्षेत्रमा पर्ने मनिचुर । पुष्पलालले तालको पानी नसुक्दैको अवस्थामा मनिचुरमा वज्रयोगिनीको नेतृत्वमा आदिम साम्यवादी समाज थियो भन्ने आकलन गरेका छन् (छानिएका रचना, भाग १) । कपडाको खासै विकास नगरिसकेको अवस्थामा मनिचुरको घमाइलो पाटामा मानव बसोबास गर्थे भन्न सकिन्छ । अर्को महत्त्वपूर्ण विषय के भने साँखुको मन्दिरमा अगेनामा बालिएको आगो कहिल्यै निभ्न दिइँदैन । रूखको मुढा नै अगेनामा झोसिराखिएको हुन्छ । त्यसको सम्बन्ध पनि आदिम समयसँग छ भन्ने देखिन्छ ।
आदिम समयमा आगो न्यानोका लागि मात्रै थिएन । पकाएर खानका लागि मात्रै थिएन । आगो सुरक्षा पनि थियो । रातमा जंगली जनावरहरूबाट बच्नका लागि आगोले सुरक्षाको काम गर्थ्यो । आगो देखेपछि जंगली जनावरहरू परपरै भाग्थे । सम्भवतः साँखुको त्यो मनिचुर क्षेत्रमा आदिम युगमा मान्छेहरू आगोलाई सुरक्षाका रुपमा प्रयोग गर्नका लागि रातभर धुनी जगाएर मस्तसँग सुत्थे । त्यो प्रचलन पछि परम्पराका रूपमा विकास भयो । त्यस युगमा सम्भवतः मनिचुर क्षेत्रमा बस्ने मानवहरू मातृसत्तात्मक परिवारमा बस्थे । सम्भवतः महिला वज्रयोगिनीको नेतृत्वमा रहन्थे । के भनिन्छ भने काठमाडौं उपत्यकाका नेवारहरू तिनै वज्रयोगिनीका सन्तान हुन् ।
त्यस्तै अर्को कुरा पनि भनिन्छ– लिच्छविहरू काठमाडौं उपत्यकामा प्रवेश गर्नुभन्दा पहिले किरातकालमै मनिचुर (मणिचुड) को जंगलमा बौद्ध विहार स्थापना गरिएको थियो । वनमा बनाइएका कारण त्यसको नाम नै ‘गुं विहार’ राखिएको थियो । वज्रयोगिनी मन्दिरपरिसर र अलि पर गरी ढुंगा खोपेर बनाइएका ९ वटा आकर्षक गुफा छन् । ती गुफालाई इतिहासकार पुरुषोत्तमलोचन श्रेष्ठले इसापूर्व तेस्रो शताब्दी अर्थात् आजभन्दा २३०० वर्ष प्राचीन मानेका छन् (गुहा, गुहालेख, गुहाचित्र एवं अन्य सम्पदा, २०७३) । यसले पनि संकेत गर्छ– मनिचुर क्षेत्र प्राचीनकालदेखि मानव गतिविधि र बसोबास भएको क्षेत्र हो । त्यस्तै काठमाडौं उपत्यकाका अन्य प्राचीन बस्तीहरूमध्ये चोभारभन्दा उचाइमा अवस्थित थानकोट, इचंगु, भुइँजसी, मनोपुर, साँखु, फर्पिङ पनि हुन् ।
सम्भवतः सिकारद्वारा जीविकोपार्जन गर्ने काठमाडौं उपत्यकाका आदिम जाति सापु र मेपुहरू हुन्, जसलाई वंशावलीहरूमा संस्कृतकरण गरेर गोपाल र महिषपाल भनिएको छ (रोलम्ब, १९८३) । उनीहरूको मूल बसोबास क्षेत्र भएकाले काठमाडौं उपत्यकाको बस्ती सुरु भएको अर्को स्थान मातातीर्थ हुन सक्छ । अहिले पनि नेवारभित्र ग्वा र हले भनेर चिनिने सापु र मेपुहरूको बसोबास टिस्टुङ–टौखेल–चित्लाङ क्षेत्रका टौखेल, न्हुलु, कुन्छा, पापुङ, पुलागाउँ र शिखरकोट गाउँहरूमा छ ।
यहाँ मातातीर्थबारे पनि पुनः विमर्श गरौं । मातातीर्थको नाम किन मातातीर्थ भएको होला ? सम्भवतः मनिचुरमा वज्रयोगिनीको नेतृत्वमा रहेझैं मातातीर्थ क्षेत्रमा पनि माता (महिला) कै नेतृत्वमा समाज चल्थ्यो । तर, लिखित इतिहासकालभन्दा अगाडिको त्यो कुरा मान्छेहरूको स्मृतिबाट हराएर गयो । बाँकी रह्यो, त्यही ठाउँको नाम मातातीर्थ । वज्रयोगिनी र मातातीर्थ नामले पनि संकेत गरिरहेको छ कि काठमाडौं उपत्यकामा मातृसत्तात्मक युगदेखि नै मानवहरू बसोबास गर्थे । सम्भवतः त्यसरी बसोबास गर्ने महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा पर्थ्यो मनिचुर र मातातीर्थ, जसले गर्दा नामकै रूपमा सही इतिहासको अवशेष अहिलेसम्म बाँकी छ । सम्भवतः ती सापु र मेपुका पुर्खाहरू थिए ।
सम्भवतः सापु र मेपुपछि काठमाडौं उपत्यका प्रवेश गर्नेमा किरातहरू थिए । यस सन्दर्भमा डा. साफल्य अमात्यको विचार छ कि पूर्वका किरातहरू सिकारको खोजीमा काठमाडौं उपत्यकामा आइपुगेका थिए । घना जंगल, स–साना दह तथा नदीहरूमा सबै किसिमका जीवजन्तु पाइने भएकाले सयौं वर्षसम्म सिकारी जीवन बिताए । उनै किरातहरूले उपत्यकावरिपरिका शिवपुरी, फुलचोकी, चन्द्रागिरि, फर्पिङ आदि डाँडाहरूमा बस्ती बसाले । यी क्षेत्रमा पाषाण युगमा प्रयोग हुने ढुंगे हतियारहरू फेला परेबाट यो पुष्टि पनि हुन्छ (काठमाडौं नारायण, २०५३) । किरात भाषामा रहेका स्थाननाम, लिच्छवि अभिलेखमा पाइएका २०० भन्दा बढी किरात भाषाका मानिएका शब्द र संस्कृत ग्रन्थहरूबाट काठमाडौं उपत्यकामा किरातहरूले सभ्यताको जग बसाएका थिए भन्ने देखिन्छ ।
लिच्छविहरू आइपुग्नुभन्दा पहिला किरातहरूले काठमाडौं उपत्यकाका अग्ला स्थानमा स–साना गाउँहरू निर्माण गरिसकेका थिए । जस्तो कि गोकर्णछेउछाउमा पर्ने अहिदुमकोट्टग्राम, लेलेको लेम्बटीद्रङ्ग, पशुपतिनाथको पूर्व र उत्तरपूर्वमा पर्ने ल्होप्रिङ र म्हुप्रिङ, ठमेलको पश्चिममा पर्ने मथङ्ग्राम, थानकोट क्षेत्रका कुदुङ्ग्राम, फेराङकोट्ट, किच्प्रिङग्राम, पासिङ्ख्य, थेन्चोग्राम र जोल्प्रिङग्राम, त्यस्तै गुन्डुनजिक पर्ने कोन्को, बूढानीलकण्ठ क्षेत्रमा पर्ने थन्थुरीग्राम इत्यादि लिच्छविकालभन्दा अगाडिका बस्ती हुन् ।
हाँडीगाउँको सत्यनारायण मन्दिरमा गरिएको उत्खननले लिच्छविकालभन्दा पहिलेको इसापूर्व १६७ देखि इसाको पहिलो शताब्दीबीचको इँटाको पर्खाल पत्ता लागेको छ । त्यस्तै अन्दिग्राममा ढुंगेधारा (जलद्रोणी) पनि फेला परेको छ, जुन किरातहरूसँग सम्बन्धित छ (सुदर्शन तिवारी, एन्सियन्ट सेटलमेन्ट्स अफ काठमान्डु भ्याली) । केही वर्षअघिको विनाशकारी भूकम्पपछि रविन कनिङ्घमको नेतृत्वमा गरिएको उत्खननले भक्तपुरको वत्सला मन्दिरको जगमा रहेको इँटा इसापूर्व पहिलो शताब्दीको हो, त्यस्तै काष्ठमण्डपको जग इसापूर्व दोस्रो शताब्दीको हो भन्ने देखाएको छ । यी तथ्यहरूले स्पष्ट हुन्छ— काठमाडौं उपत्यकामा इँटा प्रयोग गरेर बनाइएका घरहरूको बस्ती किरातकालमै सुरु भएको हो ।
इन्द्रचोकमा स्थापित आकाश भैरव मन्दिरको सम्बन्ध किरात राजा यलम्बरसँग, टेकु दोभाननजिकको पचली भैरवको सम्बन्ध किरातराजा पब्बीसँग रहेको (शान्ति सुरभ, ‘किरातकालीन सांस्कृतिक अवशेष : एक चिन्तन’) रैथाने नेवारहरूको जनविश्वासले पनि यी तथ्यहरूलाई बल पुगेको छ ।
यति धेरै मन्थन गरिसकेपछि फेरि मिथकमै फर्किएर प्रश्न गरौं— किन शिवले नै तालको पानी सुक्ने भविष्यवाणी गर्नुपरेको होला ? किन कर्कोटक नागलाई नै मञ्जुश्रीले धनसम्पत्ति जिम्मा लगाउनुपरेको होला ? काठमाडौं उपत्यकालाई किन नागह्रद, नागदह र नागबास भनिएको होला ?
काठमाडौं उपत्यकामा पाइएका ३२ हजारदेखि ४ हजार वर्षअगाडिसम्मका ढुंगे हतियार, तालको पानी सुक्नुभन्दा पहिलेदेखि कर्कोटक नागराज बस्थे भन्ने मिथक, आनुवंशिक अध्ययन तथा नेवार संस्कृतिमा माछाको अनिवार्यताजस्ता विषयले एउटा टड्कारो सम्भावनातर्फ संकेत गरेको छ— पक्कै पनि सापु र मेपुका साथै किरातहरूका सुदूर पुर्खाहरूले काठमाडौं ताल सुक्दै गरेको दृश्य आफ्नै आँखाले देखेका थिए । तेन्जिन गेइडेन (२००९) ले गरेको आनुवंशिक (जेनेटिक) अध्ययनले नेवारहरूको पुर्खा करिब १० हजार वर्षअघि काठमाडौं उपत्यकामा आइपुगेको प्रमाणित नै गरिसकेकाले यो परिकल्पनामा तार्किक सत्यता छ ।
अर्को कुरा, काठमाडौं उपत्यकाका नेवारहरूमा इन्द्रजात्रामा आकाश भैरव मन्दिरनजिक जिउँदो माछा जाँडले बगाइदिने चलन छ । त्यस्तै सगुन (शुभकार्य) मा बायाँतर्फ बाङ्गिएर सुकेको रैथाने प्रजातिका माछा (कुन्या) र सीधा सुकेको माछा (सुन्या) अनिवार्य चाहिन्छ (सुरेश किरणका अनुसार) । सम्भवतः यी दुई प्रचलन तालको माछाबाट जीविकोपार्जन गर्दाकै युगको सांस्कृतिक अवशेष हुन् । त्यसैले भन्न सकिन्छ कि तालको पानी सुकेको दुर्लभ दृश्य देखेका पुर्खाहरूले आफ्ना सन्तानहरूलाई त्यो कथा सुनाउँदै पुस्तान्तरण गरे । शताब्दिऔं पुस्तान्तरण हुँदाहुँदा खिइँदै गएर दुईवटा मात्रै मूल कुरा बाँकी रह्यो— तालको पानी चोभारबाट बगेर सुकेको हो र नागजातिहरू ताल सुक्नुभन्दा अघिदेखिका आदिम बासिन्दा हुन् । यही अवशेष समातेर समाजलाई प्रभावित गर्न हिन्दु र बौद्ध धार्मिक ग्रन्थहरूमा शिव, कृष्ण, विष्णु, दानासुर, बुद्ध र मञ्जुश्रीका कथाहरू थपिए ।
त्यसो भए मिथकमा भनेझैं तालको पानी नसुक्दैको बखतमा काठमाडौं उपत्यकामा बसोबास गरिरहेका ती नागवंशीहरू को होलान् त ? इतिहासकार निरिश नेपालको विचारमा सापु र मेपुहरू नाग वंशका हुन् र काठमाडौं उपत्यकाका आदिम बासिन्दा पनि (रोलम्ब, १९८३) । त्यही भएकाले मिथकमा मञ्जुश्रीले कर्कोटक नागलाई धनसम्पत्ति जिम्मा लगाएको कथा जडिएको हो । नागजातिहरूको आदिम बासस्थल भएकैले काठमाडौं उपत्यकालाई नागवास, नागह्रद र नागदह भनिएको हो ।
तर, लिच्छविहरूसँगै र त्यसभन्दा पछि प्रवेश गरेका संस्कृतभाषी आर्यहरूले काठमाडौं उपत्यकामा किरातहरूको प्रभावशाली उपस्थिति देखेर हिन्दु धार्मिक ग्रन्थमा शिवजीले तालको पानी सुक्नेबारे भविष्यवाणी गरेको कथा थपेको हुनुपर्छ । किनभने, शून्यमा बन्दैन मिथक । र, मिथकले कुनै न कुनै सामाजिक यथार्थलाई समातेको हुन्छ । त्यही भएर भनिन्छ नि– दुध र पानी छुट्याउन नसकिएझैं इतिहास र मिथकलाई पनि पूर्ण रूपमा छुट्याउन सकिँदैन । जस्तो कि काठमाडौं ताल सुकेर मानव बसोबासका लागि उपयुक्त उपत्यकामा परिणत भएको १० हजार वर्षअगाडिको यथार्थ अहिले इतिहास भनौं इतिहास होइन, मिथक भनौं मिथक मात्रै होइन भनेजस्तो हुन पुगेको छ ।
इतिहास अक्षरमा मात्रै लेखिँदैन, मान्छेहरूको सामूहिक स्मृतिका रूपमा, विश्वासका रूपमा, अभ्यासका रूपमा पनि निरन्तर जीवित रहेको हुन्छ । केवल हामीले त्यसलाई पढ्न सक्नुपर्छ ।
प्रकाशित : आश्विन ९, २०७८ १०:४७
रातो पृथ्वी, तातो पृथ्वी
पृथ्वीमा अर्बौं वर्षसम्म कुनै देश थिएनन् । देशहरु त केही सय वर्षअघि मात्रै मानिसले बनाएका हुन् । तीन सय वर्षअघि इन्जिन बनेपछि पृथ्वी तातो हुन थाल्यो । जब मानिस देशको चौघेरामा रमाउन थाल्यो तब उसले पृथ्वी बिर्सियो । कोइला बालेर, पेट्रोल हालेर उसले आफ्नो गति बढायो, गियर चढायो र हुइँकियो बेगले पैसा बटुल्दै, कार्बन उडाउँदै र पृथ्वी तताउँदै ।
केही दशकमै पृथ्वीमा हामीले के–के देख्यौं ? के–के गर्‍यौं ? तातो धरतीमा अब थप अन्योल बढ्नेछन् । वास्तवमा पृथ्वी नीलै राखेको ठीक, चिसै राखेको ठीक !
आश्विन २, २०७८ रमेश भुसाल
पाँच किलोमिटरको दौडपछि पाइला रोकिए । पूरै शरीरै रोयो । म सडकछेउको इँटाले बनेको एउटा सानो पर्खालमा थचक्क बस्छु, जमिनतिर मुन्टो फर्काएर– स्याँस्याँ गर्दै ! धेरै अक्सिजन हुल्न म प्रयासरत छु किनभने अंगअंगमा बढेको अक्सिजनको माग पूरा गर्न मेरो फोक्सोलाई थप सक्रिय बनाउनुपरेको छ । हावामार्फत आएको अक्सिजन नाकमुखबाट फोक्सोमा पुगेपछि त्यहाँबाट मुटुले तानेर रगतमा रहेको हेमोग्लोबिनको सहाराले शरीरभरि पुर्‍याउँछ । हावाको अक्सिजनलाई रगतमा मिसाएर शरीरभरि पुर्‍याउनु, फुर्ती गर्नु– यही हो बाँच्नु भनेको । यति गर्न नसकेको दिन जिन्दगी चैट हुन्छ !
पृथ्वीमा मानिसले हरेक कुरा निःशुल्क पाएको थियो । अहिले पो उसले हरेक वस्तुको मूल्य तोक्यो— अक्सिजनको सिलिन्डरमा, पानीको थोपा–थोपामा, जमिनको इन्च–इन्चमा, काठको फिट–फिटमा ! पृथ्वीका लाखौं प्रजातिमध्ये मानिस मात्रै एउटा व्यापारी प्राणी हो । मजस्तै मास्क लगाएका बग्रेल्ती मानिस सकेसम्म धेरै अक्सिजन आपूर्ति गर्न तल्लीन छन् । तर, के तिनीहरूले सोचेका छन्— दुई मिनेट मात्रै यो पृथ्वीको हावाबाट अक्सिजन हरायो भने के हुन्छ ? यति सोचे मात्रै पनि पृथ्वीप्रति मानिस अलि उदार हुन्थ्यो होला ! तर, उसलाई फुर्सद कहाँ ?
शरीरमा अक्सिजनको माग कम हुँदै गयो । फोक्सो बिस्तारै सामान्य अवस्थामा आएपछि आकाशतिर हेरेँ । कपूरको रूखको फेदमै बसेको पो रहेछु । टम्म बादल लागेको छ, केहीबेरपछि त्यो पक्कै झर्छ, यहाँ नभए त्यहाँ ! पानी कहिले उड्छ, कहिले बग्छ, कहिले जम्छ ! यो बडो बहुरूपी छ । पानी बहुरूपी नहुँदो हो त, यो पृथ्वी चल्ने थिएन । हिमाल नहुँदा हुन् त नदी कहाँ बग्थे ? बादल नहुँदो हो त पानी कहाँ पर्थ्यो ? खहरे कहाँ उर्लन्थे ? पानीले रूप फेरेको छ र त पृथ्वीमा जीवन चलेको छ ।
निधारबाट तप्प–तप्प पसिना झर्‍यो, कंक्रिटको भुइँमा । निधारबाट झर्‍यो, त्यसैले यो पसिना बन्यो, आँखाबाट झर्थ्यो त यो आँसु बन्थ्यो । फरक यत्ति छ, अहिले शरीरका मांसपेशी रोइरहेकाले पसिना झरिरहेको छ, मन रुँदो हो त आँखाबाट आँसु बनेर झर्थ्यो । म बसेको कुरा लामखुट्टेले सुइँको पाइसक्यो । युद्धक विमानजसरी मेरो शरीरवरिपरि फन्को मारिरहेछ, ल्यान्डिङ गर्ने दाउमा ! मेरो शरीरमा त्यो ल्यान्ड गर्ला र प्याट्ट पारौंला भनेर म पनि दाउ खोजेर बसेको छु । के थाहा उसलाई मेरो शरीर नै उसको मृत्युभूमि हो भन्ने ! एकाधपटकको प्रयासपछि मैले उसको जिन्दगी चैट पार्दिएँ । थप बाँच्ने योजनाका साथ आएको ऊ, सदाका लागि गयो । न उसका आफन्त छन्, न त कसैले दाहसंस्कारै गर्छ ! मैले प्याट्ट पारें, फ्याट्ट फालिदिएँ ।
म अलिकति निहुरिएँ, पसिनाको थोपा निधारबाटै टपक्क भुइँमा झर्‍यो । शिर अलि ठाडो पारें, त्यो पसिना नाकको डाँडीको उपल्लो भागबाट बगेर देब्रे लाग्यो र माथिल्लो ओठको कुनोभन्दा अलिपर गाला हुँदै च्यापुमा पुगेर भुइँमा खस्यो । पछिल्लो थोपा नदीजस्तै बग्यो— सलल र केहीबेरपछि झर्‍यो, अघिल्लो थोपा निधारबाटै तप्प जमिनमा झर्‍यो । थोरै ढल्कनुले पनि कति फरक पर्छ यहाँ ! यो पृथ्वी पनि २३.५ डिग्रीले नढल्केको भए, दुई ध्रुवबाहेकका ठाउँमा १२ घण्टा दिन हुन्थ्यो, १२ घण्टा रात पर्थ्यो ! थोरै ढल्केकाले सूर्यलाई फन्को मार्ने क्रममा वर्षको कहिले पृथ्वीको उत्तरी गोलार्द्धमा धेरै घाम पर्छ त कहिले दक्षिणी गोलार्द्धमा, त्यसैले जाडो र गर्मी याम ल्याउँछन् । यदि नढल्कँदो हो त अहिलेजस्तो गर्मीमा छोटा रात र लामा दिन हुँदैनथे । जाडोमा लामा रात र छोटा दिन हुँदैनथे । पृथ्वी नढल्कँदो हो त दुवै ध्रुवको ठूलै भूभागमा कहिल्यै घाम नै पर्दैनथ्यो । मानिसहरू पृथ्वीको भूमध्यरेखा वरपर मात्रै बस्न सक्थे सायद । अहिलेजसरी छरिन उनीहरू सक्दैनथे किनभने दुई ध्रुवहरूमा घाम नपरेपछिको बाह्रैमासे चिसो सहन सकिँदैनथ्यो ! थोरै नढल्केको भए यो पृथ्वी पूर्ण रूपमा अर्कै हुन्थ्यो । धन्य, पृथ्वी थोरै ढल्क्यो त्यसैले पूर्व–पश्चिम, उत्तर–दक्षिण सबैतिर सेपियन्सकै साम्राज्य छ !
तप्प झरेको पसिना किन त्यसरी नै झर्‍यो ? किन त्यो आकाशतिर गएन वा बांगिएर झरेन ? यो प्रश्न अहिले गर्दा हाँसो उठ्न सक्छ, तर केही सय वर्षअघिसम्म पनि यो पृथ्वीको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र अनुत्तरित प्रश्न थियो । जब १७ औं शताब्दीमा आइज्याक न्युटनलाई एउटा प्रश्नले घच्घच्यायो, उनले त्यसको हिसाब खोजे । भनिएअनुसार, उनले बोटबाट स्याउ सीधै तल झरेको देखे र प्रश्न गरे— किन त्यो स्याउ बांगोटिंगो भएर खसेन ? किन त्यो माथि गएन ? कुन शक्तिले त्यसलाई झार्छ ? त्यसअघि पनि पृथ्वीमा करोडौं स्याउ खसेका थिए, करोडौं मानिस जन्मेका थिए । तर, जुन प्रश्नको उत्तर न्युटनले खोजेर गुरुत्वाकर्षण भने, त्यसैका कारण अन्य लाखौं आविष्कार भए, लाखौं प्रश्नका उत्तर भेटिए । विज्ञान सामान्य प्रक्रियाको असामान्य खोज हो सायद ।
एउटा ठूलो झुसिलकिरो द्रुत गतिमा कंक्रिटको सडक पार गर्दै छ । कुनै सवारी आइहाल्यो भने कचक्कै पार्छ, तर संयोगले त्यो बाँच्यो । उसले गाडी चिनेको छैन । उसलाई के थाहा, मान्छेले के–के बनाइसक्यो ! मेरो छेउका एक हूल कमिलामाथि जब पसिनाको थोपा पर्‍यो तिनीहरूको भागाभाग भयो, कुनै मानव बस्तीमा युद्दक विमानबाट बम झरेजसरी ! अफगानिस्तानमा तालिबानले लेखेटेका मानिसहरूको झल्को दिनेखालको भगाभाग
छ त्यो !
नाडीमा घडी बाँधेको छु । केही वर्षअघिसम्म घडीले एउटा मात्रै कुरा बताउँथ्यो— समय । तर, आज घडीले हरेक पाइला गन्न सक्छ, मुटुको चाल मापन गर्छ, दौडिँदा कति ऊर्जा खपत भयो भनेर पनि घडीले हिसाब राख्छ, नक्सा कोरिदिन्छ, बधाई ज्ञापन गर्छ, धन्यवाद भन्छ, गीत सुनाउँछ, फोन उठाउँछ । यस्तो लाग्छ, घडी नै अहिलेको सर्वज्ञाता हो । घडीले लेख्यो— फास्टेन्ट फाइभ के २८.४५, कन्ग्राचुलेसन्स ! अहिले घडी लेखनदास पनि हो, पहिले–पहिलेझैं उसले सुई मात्रै घुमाउँदैन, राम्रा अक्षर पनि कोर्छ । अर्थात् आज पाँच किलोमिटर दूरी पार गरेको समयचाहिँ आफ्नै पुरानो रेकर्ड तोडेको जानकारी हो । एउटा तक्मा देखाएर उसले मलाई हौस्यायो । म मख्ख परें । मानौं घडी ओलम्पिक खेलको निर्णायक हो । र, उसले मलाई तक्मा दिएको छ । यो पनि व्यापारी अवतारको मानिसको चर्तिकला हो । जति उपभोक्तालाई फुरुंग पार्‍यो उति धेरै पैसो झर्‍यो । पुँजी पृथ्वीको प्रमुख नयाँ कथा हो । यत्रतत्र सर्वत्र यसैको चर्चा छ, यसैको महत्त्व छ !
मानिस नहुँदो हो त यो पृथ्वी कस्तो हुँदो हो ? वरिपरि आँखा घुमाउँछु । ऊ नहुँदो हो त मेरो वरिपरि देखिएको पिच गरेको सडक हुँदैनथ्यो, घर हुँदैनथे, फलामको बार हुँदैनथ्यो, म बसेको इँटाको थुप्रो हुँदैनथ्यो, कपडा हुँदैनथ्यो, घडी हुँदैनथ्यो, जुत्ता हुँदैनथ्यो, औंलामा लगाएको औंठी हुँदैनथ्यो, गोजीको मोबाइल हुँदैनथ्यो, वरपरि घुमिरहेका गाडी, मोटरसाइकल, साइकल हुँदैनथे, अगाडिको पार्क हुँदैनथ्यो, अलि पर रोपिएको खेत हुँदैनथ्यो, परको डाँडामा ठडिएको गुम्बा हुँदैनथ्यो, आकाशमा उडिरहेको जहाज हुँदैनथ्यो, त्यो बिजुलीको पोल हुँदैनथ्यो, छेउमा यत्रतत्र छरिएको प्लास्टिक हुँदैनथ्यो !
अरू के–के हुँदैनथ्यो के–के ! यी त वरिपरि देखिएका वस्तु मात्रै हुन्, त्यसबाहेक विभेद हुँदैनथ्यो, अन्याय हुँदैनथ्यो, बमबारी हुँदैनथ्यो, बन्दुक हुँदैनथ्यो, पुँजीवाद हुँदैनथ्यो, साम्यवाद हुँदैनथ्यो, समाजवाद हुँदैनथ्यो । योबाहेक अरू लाखौँ कुरा हुँदैनथे ।
म पृथ्वीबाट मानिस हटाएर वरिपरि हेर्छु । त्यहाँ देख्छु— कमिलाको लस्कर, केही लामखुट्टे, तीनवटा जुरेली, दुइटा भद्राई, एक हूल काग, केही परेवा, एउटा झुसिलकिरो, एकजोडी ढुकुर, केही झारपात, केही रूख ! त्यो भर्खरै सडक पार गरेको झुसिलकिरोले बाँच्नेबाहेक थप केही गरेको छैन । अलिपरको रूखमा देखिएको भद्राई पनि त्यहि गरिरहेछ वा बिजुलीको तारमा टेकिरहको जुरेली र भंगेरो पनि ! यस्तो देख्छु, मानिसबाहेक अरूले त यहाँ केही गरेकै छैनन् । अरूको बस् एउटै ध्याउन्न छ— खाने र बाँच्ने । मानिसको तन्तुचाहिँ अनेक छ । मानिसको पनि एउटै ध्याउन्न थियो खाने र बाँच्ने । तर, जब उसले पैसा बनायो र व्यापार सुरु गर्‍यो त्यसपछि ऊ मानिसबाट व्यापारीमा परिणत भयो । अनि पृथ्वीको दुर्दिन सुरु भयो ।
थकित शरीरलाई घरसम्म तान्छु । ल्यापटपमा बस्छु— फेरि सोच्छु, मानिस नभएको भए यो पनि त हुँदैनथ्यो । पृथ्वी साढे चार अर्ब वर्षको भयो । मानिस त धेरैमा साढे दुई लाख वर्षको मात्रै भयो होला । केही सय वर्षअघिसम्म पनि ऊ बुंगै थियो । कोठाको वरिवरि आँखा घुमाउँछु— यी सयौं किताब, कलम, मेच, टेबुल, बिजुली, सिमेन्टमा पोतिएको रङ, झ्यालको सिसा ! अहिले मेरा वरिपरि देखिएका अधिकांश वस्तु त जम्मा केही सय वर्षबीचमा मात्रै त बनेका हुन् !
कम्प्युटरमा सयौं इमेल अर्थात् इपत्र झरेका छन्, पुराना हजारौं पनि छँदै छन् । आजभन्दा एकाध सय वर्षअघिसम्मका मानिसले कहिल्यै फोनमा कुरा नगरी मरे, गाडी नचढी मरे, जहाज नदेखी मरे, टीभी नहेरी गए । अहो ! हामी कत्ति भाग्यमानी पुस्ता भयौं भनेर मख्ख परेको छु । हजुरबाले हलो चलाएर जीविकोपार्जन गरे, बाले कलम, मैलै कम्प्युटर ! खुब परिपर्वन भयो पृथ्वीमा गएका केही दशकमा । यी इमेलमा लेखिएका लाखौं शब्द यदि साँच्चै कागजमा लेख्नुपरेको भए कति रूख काट्नुपर्दो हो, कति मसी चाहिँदो हो ! फरर लेख्यो, ट्याक्क थिच्यो, उता टुप्लुक्क पुग्यो, उसले फरर पढ्यो, अनि फेरि सरर उत्तर लेख्यो र ट्याक्क थिच्यो, यता फ्याट्ट झर्‍यो क्याबात !
तर, यो इपत्र पश्चिममा हाम्रोजस्तै पहाड–हिमाल भएको, समुद्र नपुगेको स्विट्जरल्यान्ड नामको देशबाट पूर्व हान्निएर यता मीत देशमा आएको रहेछ, बडो चिन्ताजनक सन्देश बोकेर । यो त रातो पृथ्वीको कथा बोकेर झरेको छ, तातो पृथ्वीको कथा बोकेर झरेको छ । आईपीसीसी अर्थात् जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अध्ययन गर्ने वैज्ञानिकहरूको विश्वव्यापी संस्थाबाट लेखिएको इपत्र हो यो । विश्वभरिका चौध हजार अनुसन्धान केलाउन ६६ देशका २३४ जना वैज्ञानिक सामेल भएर निकालेको निष्कर्ष पत्रमा लेखिएको छ, ‘संसारभरिका वैज्ञानिकहरूको खोजले यो पृथ्वीको जलवायु प्रणालीमा अभूतपूर्व परिवर्तन आइरहेको देखाएका छन् । कम्तीमा पनि यस रिपोर्टले औंल्याएका विभिन्न परिवर्तन त विगतका हजारौं वा लाखौं वर्षमा नभएको तहको परिवर्तन देखिन्छन् जस्तो कि बढ्दो समुद्र सतह, द्रुत गतिमा पग्लँदो हिउँ ।’ पत्रमा थप लेखिएको छ, ‘सन् १८५० देखि १९०० को दाँजोमा पृथ्वीको तापक्रम औसतमा १.१ डिग्रीले बढिसकेको छ । यसको कारण मानिसले विगतको साढे दुई सय वर्षमा निकालेको कार्बनडाइअक्साइडलगायतका हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन हो । यही गतिमा अगाडि बढ्ने हो भने अबको २० वर्षमा पृथ्वीको औसत तापक्रम आद्यौगिक समयको तुलनमा १.५ डिग्रीले बढ्नेछ, शताब्दीको अन्त्यसम्म तीन डिग्रीले बढ्नेछ ।’
यो कुरो बडो जटिल छ । त्यसैले ‘नक्सामा हेर र बुझ’ भनेर इपत्रले अर्को ठेगानामा पठायो, जहाँ दाहिने कुनोमा हल्का रातो पृथ्वी एकनासले घुमिरहेको छ । हाम्रो सम्भावित भविष्य लेखेर उसले प्लस १.५ डिग्री, २ डिग्री, ३ डिग्री, ४ डिग्री लेखेको छ । म अब पृथ्वीलाई नियन्त्रित घुमाइका लागि आफ्नो औंला तयार पार्छु । अहिले कम्प्युटरमा पृथ्वी घुमाउन एउटा औंला काफी छ । रातो सन्देश बोकेर कम्प्युटरमा घुमिरहेको पृथ्वीलाई टक्क रोक्छु र फनक्क फर्काएर उल्टो त्रिभुजाकारको भारत र आसपासको क्षेत्रमा ल्याएर अडिन्छु, जसलाई आधुनिक मानवले दक्षिण एसिया भन्छ । तर, यो पृथ्वीको वास्तविक नक्सा हो, जसमा देशहरू छैनन् । कि त जमिन छ कि त पानी । पृथ्वीमा अर्बौं वर्षसम्म कुनै देश थिएनन् । देशहरू त केही सय वर्षअघि मात्रै मानिसले बनाएका हुन् । तर, जब देश बन्न थाले, पृथ्वी तातो हुन थाल्यो, विज्ञानको भाषामा रातो हुन थाल्यो । देश बन्न थालेपछि पुँजी जम्मा गरेर को धनी हुने भन्ने होडबाजी चल्यो, त्यसपछि पृथ्वी तातो हुन थाल्यो । र, मानिसले अठारौं शताब्दीमा इन्जिन बनायो । कोइला, पेट्रोलियमले इन्जिन चलायो । आफ्नो गति बढायो, गियर चढायो र हुइँकियो बेगले पैसा बटुल्दै, कार्बनडाइअक्साइड उडाउँदै ।
म उल्टो त्रिभुजको माथिल्लो भाग, जहाँ कतै नेपाल भन्ने देश छ, त्यसबाट पश्चिम हान्निन्छु अनुमानित पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इरान हुँदै ! त्यसपछि एउटा कुलोजस्तो अरब सागरको उत्तर पश्चिम हानिएको चोसो काटेर साउदी अरबको आसपासबाट अफ्रिका पार गर्छु । उत्तर उकालिए युरोप हुँदै आर्कटिक पुगिन्छ, दक्षिण झरिरहेको अफ्रिका कतै अन्टार्टिकातिर पुगौंला जसरी फिँजारिएको छ । अफ्रिकाको दक्षिणी भाग भारतको जस्तो चुच्चो नभएर अलि बुच्चो छ । थप पश्चिममा अटलान्टिक महासागर काटेर मध्यअमेरिका हुँदै प्रशान्त महासागर छिर्नुअघि अलिकति उत्तरमा रहेको सयुंक्त राज्य अमेरिकामा आँखा लगाएर म टक्क रोकिन्छु । यो पृथ्वीलाई रातो बनाउने प्रमुख भूमिमध्येको अग्रणी हो यो, पृथ्वीमा सबैभन्दा बढी राँइदाइँ गरेको मुलुक । म प्रशान्त छिरेर लामो समुद्री यात्रापछि फेरो मारेर चीन पस्छु, जुन रातो पृथ्वी बनाउने पछिल्लो ठूलो खेलाडी हो । थप पश्चिम बढेर छिमेकको तिब्बती पठारतिर गतिलाई धीमा बनाएर अनुमानित नेपालमा औंला रोक्छु । केही सेकेन्डमै पृथ्वीको एक फन्को मार्छु । यो पृथ्वीको नक्सा कोर्न मात्रै कत्तिले पसिना चुहाए, कत्ति त वर्षौं डुले । सयौं वर्ष त यसको नक्सा बनाउन मात्रै लाग्यो । आज मैले यही पृथ्वीलाई औंलामा नचाइरहेको छु !
कुनै देश, महादेश, महासागर, सहर, गाउँ नलेखिएको पृथ्वी घुम्दा पो पृथ्वी बल्ल सगोलमा देखिँदोरहेछ । ठाउँ लेखिएका नक्सा हेरेर पृथ्वी घुम्दा त कतै मुसलमान देखिन्छ कतै हिन्दु, कतै क्रिस्चियन देखिन्छ कतै जैन । कतै कालो मानिस देखिन्छ कतै गोरो । कतै गरिब देखिन्छ कतै धनी । कतै पुँजीवादी देखिन्छ कतै साम्यवादी । कतै युद्ध देखिन्छ कतै शान्ति । बडो जटिल नक्सा पो देखिन्छ । बेनामे पृथ्वी मैले घुमाएकै रैनछु, जहाँ कि त जमिन देखिन्छ कि त हिउँ वा पानी । मानिसबाहेक यो पृथ्वीमा कसैको गाउँ छैन, सहर छैन, देश छैन, महादेश छैन । कित्ताकाट गरेको पृथ्वी मानिसले बनाएको हो । अरू कसैले पृथ्वीलाई कित्ताकाट गरेको छैन ।
पृथ्वीको खास रङ नीलो हो किनकि यसको दुईतिहाइ भूभाग पानीले भरिएको छ । तर, मैले हल्का रातो पृथ्वी घुमाइरहेको छु अर्थात् १.१ डिग्री तातेको पृथ्वी, गुगलअर्थको जस्तो नीलो पृथ्वी होइन । वैज्ञानिकहरू तातोलाई रातो रङले चिनाउँछन् । हामी हल्का रातो रङको पृथ्वीवासी भइसकेका छौं । पूर्व–पश्चिम एक फन्को मारेपछि म पृथ्वीलाई स्वाट्टै उत्तरी गोलार्द्धको टुप्पोतिर पुर्‍याउँछु— रुसभन्दा पनि माथि ग्रिनल्यान्ड आसपासतिर, अनुमानित । त्यता त बडो गाढा–गाढा रातो पो देखिन्छ ! त्यसपछि स्वाट्टै दक्षिणी गोलार्द्धको टुप्पोमा अन्टार्टिकातिर झार्छु, त्यहाँ नेपाल भएको भूभागभन्दा बढी रातो देखिन्छ, तर उत्तरी गोलार्द्धको टुप्पोभन्दा भने कम रातोपना !
म त्यसपछि प्लस दुई डिग्री थिच्छु र पृथ्वी घुम्छु । रातो रङ त झन् गाडा बन्छ, रातो रङ थप ठाउँहरूमा फैलिन्छ । तीन डिग्री थिचेर पृथ्वी सयर गर्छु, पृथ्वी सबैतिर राताम्मे हुन्छ । जब चार डिग्री थिचेर हर्छु, जमिन त पूरै रगतले लिपेजस्तो देखिन्छ, समुद्रचाहिँ अलि फिक्का ! जति गाढा रातो रङ त्यति बढी तातोपना !
यो रातो रङको अर्थ के हो त ?
पूरै पृथ्वी औसतमा तातिसकेको छ, तर तात्नेक्रम कतै बढी छ कतै कम !
कसरी भयो त पृथ्वी रातो अर्थात् तातो ?
यो रातो कथा छोटो समयमा बुनिएको हो— करोड, लाख वा हजार वर्षअघि पृथ्वी तात्न सुरु भएको थिएन । यो तातो पृथ्वीको उमेर जम्मा तीन सय वर्षजति हो, स्मरण रहोस् पृथ्वीको उमेरचाहिँ साढे चार अर्ब वर्ष हो । मानिसले पहिले पृथ्वीमा सबै कुरा पाखुराले गर्थ्यो वा जनावरका सहराले, त्यो क्रम हजारौं वर्ष चल्यो ।
तर, बेलायतमा इन्जिन बनेपछि मान्छेले कोइला भेट्यो, त्यसलाई उसले खुब बाल्यो । कोइला बालेर बिजुली पनि निकाल्न थाल्यो, उद्योग चलायो, सामान बनायो । त्यति मात्रै होइन, उसले पेट्रोलियमका खानी भेट्यो । इन्जिनले चल्ने गाडी बने, रेल, जहाज, पानीजहाज अनेक बने । मानिसले चमत्कार गर्‍यो । पैताला खियाएर हिँडिरहेको मानिस हेर्दाहेर्दै गुड्यो, त्यसपछि उड्यो र अर्को ग्रहमा समेत पुग्यो । ओखतीमुलो पनि बनायो । एकातिर ऊ पृथ्वी घुम्यो, भूगर्व खोतल्यो अर्कोतर्फ आफ्नै शरीरभित्रका अंगअंग हेर्न सकिने यन्त्र बनायो । धेरै बाँच्न अस्पताल बनायो, आरमले बस्न सहर बनायो ।
मानिस मख्ख पर्दै थियो, तर बीसौं शताब्दीको मध्यतिर आउँदा केही वैज्ञानिकले थाहा पाए— मानिसले जे बालिरहेको छ वा इन्जिनमा हालिरहेको छ, त्यसले त वायुमण्डलमा व्यापक कार्बनडाइअक्साइड नामको ग्यास फालिरहेको छ । विज्ञानले पनि चमत्कार गरिसकेको थियो । हजारौं, लाखौं वर्षअघिको हिउँ केलाएर त्यसबेलाको हावामा कार्बनडाइअक्साइडको मात्रा कति थियो भनेर ऊ खोज्न सक्ने भइसकेको थियो । लाखौं, करोडौं वर्षअघिको जलवायुको अवस्था कस्तो थियो भन्ने बुझ्न ऊ ढुंगा–माटो केलाउन सक्ने भइसकेको थियो । त्यसपछि मापन सुरु भयो र सन् ९० को दशकमा वैज्ञानिकहरूले किटानी गरेर भने— पृथ्वी मानिसका कारणले तात्यो । अर्थात् वास्तवमा पृथ्वी तातो छ, कम्प्युटरमा पृथ्वी रातो छ । तातो भनेकै रातो हुनु हो ।
यो रातो पृथ्वीको इपत्र त वैज्ञानिकहरूको छैटौं प्रतिवेदन हो, गत ४० वर्षभित्र निकालेको । बीसौं शताब्दीको मध्यमा पाँच अर्ब टन प्रतिवर्ष भएको कार्बन उत्सर्जन अहिले ३५ अर्ब टन कटिसक्यो, जसको दुईतिहाइ उत्सर्जन मानिसका लागि प्रयोग हुने यातायात, बिजुली र उद्योगहरूबाट हुनेगर्छ । कार्बनडाइअक्साइड पृथ्वी तताउने प्रमुख ग्यास हो । हाम्रो दक्षिणमा रहेको भारत, उत्तरमा रहेको चीन र सुदूरपश्चिममा रहेको अमेरिकाले मात्रै पृथ्वीमा मानिसले उत्सर्जन गर्ने कुल कार्बनडाइअक्साइडको आधा उत्सर्जन गर्छन् । तीन देश बराबर पृथ्वीका बाँकी सबै देश ! यो हिसाब बडो असन्तुलित छ । इन्धनले मानिसलाई आराम दियो, उसलाई विकसित बनायो । तर, पृथ्वीको ज्वरो निकालिदियो, जलवायुको चक्र नै बदलिन थाल्यो, समुद्र सहत बढायो र हिमाल पगाल्यो ।
पृथ्वी तातेपछि के हुन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर पनि वरिपरि नै छ, देखिइसकेकै छ ।
यो रातो पृथ्वीको सन्देशसहितको इपत्र झरेको केही दिनपछि एक रात काठमाडौं खाल्डोमा झमझम पानी परेको छ । बिहान उठ्दा त नदीले उठीबास बनाएका नदी किनारका बस्तीको फोटो छ्याप्छ्याप्ती भइसकेछन् । कति पानी परेछ ? १२१.५ मिलिमिटर । मैले खोज्न थालें, योभन्दा अघि काठमाडौं उपत्यकामा यस्तो पानी कहिले परेको रहेछ ! सरकारी तथ्यांक भन्छ— पानी मापन गर्न थालेको सन् १९६८ देखि केलाउँदा योभन्दा बढी पानी जम्मा तीनपटक परेको छ । सन् १९८७ मा १२४.४ मिलिमिटर, सन् २००२ मा १७७ मिलिमिटर र सन् २०१२ मा १२६ मिलिमिटर । यसको अर्थ हो अब यस्तो छङछङ पानी पर्ने क्रम बढ्छ, थोरै समयमा धेरैपटक पर्छ । अब पानी झमझम मात्रै पर्दैन, छङछङ पनि झर्छ— झरना जसरी । यही हो तातो पृथ्वीको कथा, झमझमबाट छङछङको यात्रा !
तातो पृथ्वीमा यस्ता उत्पातका घटना बढिसके, अब थप बढ्नेछन् । समुद्र सतह द्रुत गतिमा उकालो लाग्नेछ, बाढी पहिरो बढ्नेछ, समुद्री आँधी थप विनाशकारी हुनेछन्, कतै उत्पात पानी पर्नेछ त कतै भयंकर खडेरी लाग्नेछ, यस्तैयस्तै । गरिब झन् समस्यामा पर्नेछन्, तर धनीहरू पनि मख्ख परेर नबसे हुन्छ । प्रकृतिका अगाडि पैसाको मात्रै केही लाग्दैन । समुद्री आँधीले अमेरिकामा पनि भागाभाग छ, बंगलादेशमा पनि, बाढीले मेलम्चीमा पनि उठीबास छ उता जर्मनीमा पनि । तापक्रम वास्तवमा पृथ्वी चलाउने इन्धन हो । यसमा आउने सामान्य फेरबदलले पनि व्यापक असर गर्छ । एकातिर जताततै अव्यवस्थित विकासले विनाश गरिरहेको छ भने अर्कोतर्फ पृथ्वी नै तातेर जलवायुको चक्रमै परिवर्तन भइरहेको छ ।
तातो पृथ्वीमा जे पनि छिटोछिटो भइरहेको छ । अब परिवर्तनका कुरा सुन्न हजुरबा– हजुरआमा चाहिँदैनन्, बा–आमा पनि जरुरी छैन, दाइ–दिदीले ठूला–ठूला परिवर्तनको कुरा भन्न सक्छन् । अझै उनीहरू पनि चाहिँदैनन्, आफैं एकबारको जुनीमै ठूला–ठूला घटना बारम्बार देख्न पाइनेछ । यसो फर्केर हेरौं त विगतका केही दशकमै हामीले के–के देख्यौ ? के–के गर्‍यौं ? तातो पृथ्वीमा थप अन्योल बढ्नेछ, थप कोलाहल हुनेछ । आशा गरौं— आफैंले आफैंलाई ‘बुद्धिमान’ भनिरहेको यो पृथ्वीका राजा प्रजाति अर्थात् सेपियन्सले यो विषय छिटो बुझ्नेछ र सुरक्षित यात्रा तय गर्नेछ । पृथ्वी नीलै राखेको ठीक, चिसै राखेको ठीक !
प्रकाशित : आश्विन २, २०७८ १०:०६